बुर्काभित्रै छोपिएको सौन्दर्य- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
बुर्काभित्रै छोपिएको सौन्दर्य
वैशाख १८, २०७६ मधु शाही
बाँके — कालो बुर्काभित्र चन्द्रमा जस्तै उज्यालो अनुहार । उनी त्यसलाई अझै चम्किलो पार्न चाहन्छिन् । त्यसैले नियमित रूपमा पार्लर धाउने गर्छिन् । नेपालगन्जस्थित एक ब्युटिपार्लरमा मुस्लिम समुदायकी महिलाले फेसियल गर्न आएको देख्दा पहिलो पटक देख्नेहरू अचम्मै परे ।
तर, उनका लागि पार्लर नौलो थिएन । ब्युटिसियनले उनलाई चार वर्षदेखि निरन्तर बुर्काभित्रको सुन्दरता निखार्न मद्दत गर्दै आएकी छन् । 'हरेक महिना फेसियल गर्छु,' रजिया बेगमले भनिन्, 'तर, कस्ती देखिएकी छु । कसैलाई थाहा हँुदैन ।' उनी घरबाहिर निस्केर काम गर्न त परै जाओस् पार्लरसम्म आउन पनि परिवारभित्रकै सदस्यको साहरा लिनुपर्छ । प्रायः उनका श्रीमान्ले पार्लरमा पुर्‍याउँछन् । फेसियल सकिएपछि फेरि उनै लिन आइपुग्छन् ।
आधुनिक युवतीले सौन्दर्यलाई आत्मविश्वास बढाउने सूत्र मानेका छन् । तर, बुर्कामा सजिएका केही मुस्लिम समुदायका महिलाले आफ्नै सुन्दरताको परिभाषा अरूकै मुखबाट सुन्न लालायित छन् । खजुरा घर भएकी २५ वषर्ीया आना खानले विवाह गरेको तीन वर्ष भयो । विवाह हुनुभन्दा अघि उनी कालो बुर्कामा थिइनन् । जुन दिन उनले जीवनसाथी पाइन्, त्यस दिनदेखि मुहारमा पर्दा छायो । यो उनको वैवाहिक सम्बन्धको चिनो हो । उनलाई सुन्दर बन्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि थपियो ।
घरमा बस्ने, खाना पकाउने अनि चिटिक्क रहिरहनु आफ्नो दैनिकी रहेको उनले सुनाइन् । मुस्लिम समुदायका महिला निकै राम्री हुन्छन् भन्ने गाइँगुइँ उनले बेलाबखत सुन्ने गर्छिन् । यसको राज के होला ? आना व्यंग्य गर्दै भन्छिन्, 'कहिल्यै नदेखिने अनुहार जसका लागि पनि राम्रै लाग्नु स्वाभाविक हो ।' विडम्बना पार्लर धाउँदा पनि उनको सौन्दर्यको वर्णन गरिदिनुपर्ने मान्छेले बेवास्ता गरिदिँदा दुःख लाग्छ । कर्ली कपाल स्ट्रेट गरेर सिल्की बनाएको दिन सासुको कुटाइ खानुपरेको क्षण उनको मस्तिष्कमा अझै ताजा छ । सुन्दर कसका लागि देखिने ? आनाजस्तै थुप्रै मुस्लिम महिलाको एउटै जवाफ हुन्छ, 'सोहरके लिए ।' अर्थात् श्रीमाना लागि ।
रूपको तारिफ ऐनाले भन्दा पनि श्रीमान्ले गर्दा खुसी लाग्ने अमिना खानले बताइन् । राझाँ घर भएकी ३६ वर्षीयाउनको दैनिकीमध्ये शृंगारिनु पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । पार्लरकै लागि भनेर उनी मासिक ३ हजार रुपैयाँ बजेट नै छुट्याउने गरेको बताउँछिन् । आफूसँग एक रुपैयाँ आम्दानी नभए पनि पार्लर खर्च भनेपछि श्रीमान्ले खुरुक्क पैसा दिने गरेको उनले सुनाइन् । 'सुन्दरतामा लगानी जति पनि पाइन्छ,' उनी भन्छिन्, 'कहिलेकाहीँ बचेको पैसा जम्मा गर्छु ।' उनले हरेक महिना पार्लरबाट बचाएर ५ सयदेखि हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको बताइन् । सौन्दर्यको बजेट कटाएर अर्थ संकलन गर्ने आफूजस्तै अरू पनि थुप्रै संगिनी रहेको उनी दाबी गर्छिन् । मात्रै यति फरक छ । धेरैले मनको कुरा मन मै लुकाएर राख्छन् ।
नेचुरल ब्युटिपार्लर नेपालगन्जकी ब्युटिसियन सरिता बोहराले दुई दशकदेखि पार्लर चलाउँदै आएकी छन् । उनको अनुभवमा मुस्लिम समुदायका महिला बुर्काभित्रै भए पनि सौन्दर्यमा विशेष रुचि दिने गरेका छन् । 'खास गरी आँखाको मेकअपमा उनीहरू बढी जोड दिन्छन्,' सरिताले भनिन्, 'देखिने अंग भनेकै यही हो, सायद त्यसैले सजाउन चाहन्छन् ।'
गाजल उनीहरूको विशेष सौन्र्दय सामग्री हो । अरूका लागि सुन्दर हुनुमा उनीहरू बढी केन्दि्रत भएको उनले बताइन् । बुर्का फालेर मुहार देखाउने चाहना भए पनि ती महिला यसमा खासै आवश्यक ठान्दैनन् । ब्युटिसियन सरिताले बेलाबखत पार्लरमा आएका यस्ता महिलालाई सम्झाउने गर्छिन् । बिहे भोजका लागि अधिकांश ब्राइडल मेकअप गर्न पार्लर आउन थालेका छन् । १५ वर्ष पहिले यस्तो पटक्कै थिएन । अहिले मुस्लिम समुदायका महिला नै धेरै ग्राहक बन्न थालेको उनले खुलाइन् । 'मलाई सम्झना छ, मुस्लिम महिला पार्लर धाउनु निकै गलत मानिन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'अहिले पार्लरसम्म त आउँछन् तर बुर्कामै सौन्दर्य लुकाएर जान्छन् ।'
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ १०:१३
मार्बल कमिक्समा आधारित सुपरहिरो फिल्म 'एभेन्जर्स : इन्डगेम' ले रिलिजसँगै विश्वव्यापी रूपमा सनसनी मच्चाएको छ । ग्लोबल बक्सअफिसमा उक्त फिल्मले तीन अर्ब डलरको कमाइ गर्दै सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्मको सूचीको पहिलो नम्बरमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
अहिलेसम्म उक्त रेकर्ड जेम्स क्यामरुन निर्देशित फिल्म 'अवतार' ले दुई अर्ब ८० करोड डलर कमाइको रेकर्ड राखेको छ । जसलाई 'एभेन्जर्स : इन्डगेम' ले पाँच दिनमै एक अर्ब २२ करोड डलरको कमाइ गर्दै दू्रतगतिमा अघि बढेको छ ।
एन्थोनी एन्ड जोय रुसो दाजुभाइको निर्देशन रहेको यस फिल्मले अमेरिकन बक्सअफिसबाट मात्रै सुरुवाती पाँच दिनमा ३५ करोड ६० लाख डलर कमाइ गरेको थियो । अमेरिकी ट्रेड एनालिस्ट जेसिका रिफले त फिल्मले विश्वव्यापी रूपमा साढे तीन अर्ब डलरसम्म कमाउन सक्ने अध्ययन गरेको बताएका छन् । फिल्मलाई दोहोर्‍याएर हेर्ने दर्शकसमेत पाइएको र व्यापारको दरमा खासै गिरावट नआएकोले पनि सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म हुने बलियो आधार तय भएको बताइएको छ ।
'एभेन्जर्स : इन्डगेम' ले चीनदेखि भारतसम्म पनि आफ्नो हालिमुहाली कायम राखेको छ । भारतमा पनि फिल्मको विकेन्ड कमाइ ब्लकबस्टर्स रहृयो । तीन दिनमै एक सय ५० करोड भारु कमाइ गरेको फिल्मले मंगलबारको पाँचौं दिनसम्ममा दुई सय करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।
सोमबार नै फिल्मले ३१ करोड भारुको कमाइ गर्दै उक्त दिनमा भारतीय बक्सअफिसमा सर्वाधिक कमाइ गर्नेमा दोस्रो स्थानमा आएको थियो । उक्त रेकर्ड 'बाहुबली : द कन्क्लुजन' का नाममा रहेको छ । भारतीय ट्रडे एनालिस्ट तरण आदर्शले भने 'एभेन्जर्स : इन्डगेम' ले भारतीय बक्सअफिसमा भारतीय फिल्मकै रेकर्डलाई तोड्ने अनुमान गरेका छन् ।
यस फिल्मले पहिलो साता सर्वाधिक कमाइ गर्ने 'दंगल' को एक सय ९७ करोड भारुको रेकर्डदेखि 'टाइगर जिन्दा है' को दुई सय ६ करोड र 'सन्जु' को दुई सय दुई करोड भारु सबैलाई उछिन्नेछ भने 'बाहुबली : द कन्क्लुजन' ले बनाएको दुई सय ४७ करोड भारुको एक साताको व्यापारलाई चुनौती दिने छ ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ १०:११